काठमाडौंको जग्गा सरकारले तोकेभन्दा १० गुणा महँगो, दरबारमार्गमा आनाको ९ करोड, कहाँ कति मूल्य?
काठमाडौं, असार १२ : काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र जग्गाको सरकारी मूल्य निर्धारण गरेको छ। तर, त्यो मूल्यमा भने कसैले पनि जग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन्। जग्गा किन्न महानगरले तोकेको भन्दा झण्डै दश गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ।
महानगरले दरबारमार्ग, न्यूरोड, ठमेल, पुतलीसडकलगायत क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ। तर, मालपोत कार्यालयको तथ्यांक भने फरक छ।
मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, दरबारमार्गको जग्गा सात करोड रुपैयाँ प्रतिआनामा विक्री हुने गरेको छ। अझ त्यहाँको वास्तविक मूल्य त ९ करोडभन्दा माथि हुन्छ। मालपोत कार्यालयका अनुसार महानगरले तोकेको मूल्यमा कुनै पनि क्षेत्रमा जग्गा पाइँदैन।
काठमाडौं महानगरले हनुमान ढोका, न्यूरोड, ठमेल, केशरमहल, जमल, दरबारमार्ग, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, पुतलीसडक, कमलादी, भद्रकाली, रत्नपार्कलगायतका क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको मूल्य ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ। तर, यी क्षेत्रमा चारदेखि ९ करोड रुपैयाँसम्ममा जग्गा कारोबार हुने गरेको तथ्यांक छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सय ७७ स्थानको जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। तर, महानगरले तोकेको मूल्यमा कुनै पनि क्षेत्रमा जग्गा पाइने गरेको छैन।
योपनि : काठमाडौंकाे जग्गाको मूल्य प्रतिआना चारदेखि ५० लाखसम्म, कहाँ कति? (सूचीसहित)
काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा यतिवेला जग्गा किनबेच मौलाएको छ। काठमाडौंका भित्री क्षेत्रमा जग्गा खाली नहुनु तथा अत्यधिक महँगो भएकाले बाहिरी क्षेत्रमा किनबेच हुन थालेको छ। दुई वर्षअघि चार लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा पाइने जग्गाको मूल्य अहिले १० देखि १५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
महानगरले पाँच वटा क्षेत्रका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ। महानगरले प्रतिआना चरा लाख रुपैयाँदेखि प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको मूल्यांकन गरेको छ। जबकि त्यहाँको जग्गा ९ करोडभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ।
Published Date: Thursday, 27th June 15:47:10 PM